Hacking Book (E-book 40+ မြန်မာလို) | Myanmar Black Hacking
16 Hacking Book (E-book 40+ မြန်မာလို)
တောင်းဆိုသူတွေအတွက်ကြောင့် Yahoo / Gmail မေးလ် ကျော်နည်းခွနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
pdf စာအုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့Download ဆွဲပြီး အချိန်ယူလေ့လာနိုင်မှာပါ
မူရင်းပို့ စ်ပိုင်ရှင်ကတော့ ဦးအာကာပါ ( ကျွန်တော် စာရေးသူကတော့ Gmail / facebook Hack နည်း Hack ဘာညာမပြောချင်ပါဖူး ) -_-
Password သိတောင် Gmail အကောင့်ကိုHack လို့မရစေရဘူး
IP address သိရင်ဘယ်လို hackလို့ရနိုင်သလဲ?
မိမိ Facebook အကောင့် password မေ့သွားရင်ပြန်ယူတဲ့နည်း
Hacker တွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်းများ နှင် အခြားစာအုပ်ပေါင်း40 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
file size ကတော့ 66.8 MB (70,072,916 bytes) ရှိပါတယ်
မှတ်ချက် - Gmail / Facebook account hacking အကြောင်းဘာမှမသိပါဖူး -_-
G-Mail & Yahoo Mail Cracking (E-book မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို Min Soe Yar Sar ကနေတဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... G-Mail & Yahoo Mail Cracking E-book လေးတစ်အုပ်ပါ။ မြန်မာလို ရေးထားတာ လေးမို့ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်မြှောက်အောင် ကူညီပေးတဲ့ ညီငယ် ချာတိတ် ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကဲ ဖတ်ချင်တဲ့ ညီကိုမောင်နှမ အားလုံး ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Download ဆွဲသွားကြပါ။ ကျွန်တော် သိသလောက်တတ်သလောက်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ G-Mail , Yahoo Mail အပြင်တစ်ခြားသော Google Talk မှာ login ၀င်သောအခြားအကောင့်များကို အကုန်လုံးကို Crack နိုင်ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ တော့ ထင်ပါတယ်။
May 28, 2015, 10:19:00 PM
May 30, 2015, 4:45:00 PM
Oct 11, 2015, 7:22:00 AM
Jan 4, 2016, 11:07:00 PM
Jan 20, 2016, 7:20:00 AM
Mar 4, 2016, 7:49:00 AM
just click "Download" and click again "Download"
Mar 14, 2016, 3:34:00 AM
တကယ်​ကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဆရာတို့​ရေ. ပညာများ ဒီ့ထက်​မက မျှ​ဝေနိုင်​ပါ​စေဗျာ
Mar 26, 2016, 10:42:00 PM
2 step ခံထားတဲ့ account ကို hack နည်းမရှိဘူးလားဗျ
Jan 23, 2017, 3:26:00 AM
download link က သေနေတယ်ဗျာ....
Oct 21, 2018, 5:14:00 AM
Jul 30, 2019, 2:18:00 AM
Apr 17, 2020, 11:58:00 AM
i like UGMH
May 9, 2020, 8:47:00 PM
Jun 20, 2020, 7:53:00 AM
Jul 9, 2020, 9:50:00 PM
Download lote loze ma ya buu Kha Byar
Aug 7, 2020, 11:23:00 PM